स्व.दुर्गादत्त जोशी ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक’बाट सम्मानित « News24 : Premium News Channel
स्व.दुर्गादत्त जोशी ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक’बाट सम्मानित
काठमाडौं । त्याग, निष्ठा र नैतिकताका प्रतिमूर्ति स्व.दुर्गादत्त जोशीलाई ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक’बाट सम्मान गरिएको छ । सातौ संविधान दिवसको अवसरमा स्व. जोशीलाई उक्त पदकबाट सम्मान गरिएको हो ।
वि.सं.१९८१ पैष १८ गते कविराज गणेशदत्त जोशी (आयुवेद आचार्य) र पदमावतीदेवी जोशीका प्रथम सन्तानको रुपमा जन्मिएका स्वर्गीय जोशीको जीवन संघर्षपूर्ण रह्यो । सादा जीवन तथा वैचारिक उत्कृष्ठताका उपासक स्व. जोशी लोकतन्त्रका अथक उपासक थिए ।
उनको शिक्षा आरम्भ घरमै भएपनि पूर्व मध्यमको लागि ऋषिकेश गएका थिए, भने उत्तर मध्यमको लागि बनारस गएका थिए । भारतमा तत्कालीन अवस्थामा स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो त्यसको प्रभाव उनमाथी पनि पर्न गएको थियो ।
उनी त्यहाँको विश्वविधालयको विधार्थी सस्थांको महामन्त्री तथा उपाध्यक्ष भएका थए । उनी भारतमानै दुई महिना जेल पनि परेका थिए । शास्त्री तहको अध्ययन गर्दा गर्दै बनारसवाट छोडेर त्रिचन्द कलेज काठमाडौंमा वि.ए.को अध्ययन प्रारम्भ गरे । उनको बुवा स्व. गणेशदत्त जोशीसहित दशरथ चन्द्रका गुरु थिए ।
स्व. दुर्गा दत्त जोशीको विद्रोशी स्वभाव उनका बुवाबाटनै प्राप्त भएको थियो । उनी नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकाल देखिनै सम्पर्कमा थिए । उनका समकालीन स्वं कृण्ण प्रसाद भटराई तथा दुर्गा दत जोशीले बनारसमा संगै अध्ययन गरेका थिए ।
नेपालमा उनको राजनैतिक विद्रोह २००६ सालदेखि प्रारम्भ भएको थियो । त्यस्तै बैतडीमा किसानहरुको मर्का बुझ् भनि बलदेव शम्मेर शाणाको भ्रमण (दौडा) भएको थियो तर, बलदेव शम्शेरले उल्टै किसानहरुको शोषण गर्न थालेपछि स्वं दुर्गादक्त जोशी, स्व. खेमराज जोशी, स्वं दक्त राम भट्ट तथा स्वं मनोरथ पन्तले हातले लेखेका पर्चाहरु ठाउँ–ठाउँमा टासेर लिखित विरोध गरेका थिए ।
पर्चा लेख्ने कार्य स्वं दुर्गादक्त जोशीले गरेका थिए, भने सवै मिलेर सदरमुकाम भरी छर्ने काम गरेका थिए । सोही कारण पक्राउपूर्जी जारी भयो । केही समय वैतडी शाहीलेकको विधालयमा शिक्षण कार्य गरेका जोशीले २००९ सालदेखि नेपाली कांग्रेसका पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रुपमा काम गरे ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा ६८ नं. क्षेत्रबाट सांसदमा निर्वाचित भएका स्वं जोशीको २०१९ सालमा सवोस्वहरणसहित उनलाई तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रियतत्व घोषणा गरि देख्ने वित्तिकै गोली हान्ने आदेश जारी गरिएको थियो ।
सोही कारण उनले १० वर्ष निर्वासनमा बिताएका थिए । अनवरत लोकतान्त्रिक योद्धाको रुपमा काम गरेका स्वं जोशी आन्दोलनको नेत्तृव गर्ने क्रममा, २०४६ सालमा पक्राउ परी कन्चनपुरस्थित कारागारमा राखिएको थियो ।
स्वं जोशी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा २०४८ सालमा राष्ट्रिय सभा–सदस्य समेत भएका थिए । जीवनभर प्रजातन्त्रलाई मुलमन्त्रको रुपमा राजनीति गरेका स्वं जोशी इमान्दार राजनीतिक कर्मीको रुपमा चिनिन्छन् ।
आफ्नो मूल्य मान्यताहरुलाई आफ्ना जीवनका अप्ठ्याराहरुसँग कहिले पनि सम्झौता नगर्ने स्वं जोशीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत प्रतिनिधित्व गरेका थिए । २ छोरा र पाँच छोरीका बुवा जोशीको २०६६ पौष ६ गते तत्त्कलीन धनगढी नगरपालिका–३ स्थित आफ्नै निवासमा देशावासन भएको थियो ।
चर्चमा छुरा प्रहार गरी बेलायती सांसदको हत्या
एजेन्सी । बेलायतमा छुरा प्रहारबाट एक सांसदको हत्या भएको छ । शुक्रबार सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ
बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवककाे मृत्यु
मकवानपुर । मकवानपुरमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार राति